people Nepal » किन उत्तर दिशामा शिरानी पारेर सुत्नु हुँदैन ? यस्ता छन् हिन्दुसंस्कारहरु किन उत्तर दिशामा शिरानी पारेर सुत्नु हुँदैन ? यस्ता छन् हिन्दुसंस्कारहरु – people Nepal
किन उत्तर दिशामा शिरानी पारेर सुत्नु हुँदैन ? यस्ता छन् हिन्दुसंस्कारहरु
नेपाली समाजमा गरिने विभिन्न संस्कारहरु आ(आफ्नो आस्था अनुसार धर्मसँग जोडिएका हुन्छन् । ति संस्कारहरु कुनै न कुनै तवरले रहनसहन, भौगोलिक बनावट, समयसापेक्ष अनुसार प्रभावित भएका हुन्छन् । पुर्खादेखि चली आएका यी विविध संस्कारहरु एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हस्तान्तरण हुँदा कारणहरु हस्तान्तरण नहुनु, तिब्र बसाइ सराईको कारण अन्य जाति तथा धर्महरुको समिश्रण हुँदै जानु तथा नयाँ पुस्ताहरुमा पश्चिमेली संस्कारको हावी बढ्दै जानुले गर्दा बाजे बराजुहरुले गर्दै आएका कतिपय संस्कारहरुलाई रुढिवादी परम्पराको रुपमा चित्रण गरिनु स्वाभाविक पनि हो । हाम्रा बराजुहरुले पालना गर्दै आएका धेरै संस्कारहरु रुढिवादी हैन, समयसापेक्ष बैज्ञानिक आधारहरु थिए भन्ने कुराहरु तल उल्लेखित संस्कारहरुको मूल्य मान्यताहरुले दर्शाउँछ ।
खाना खानु अघि थाल वरिपरि पानीको घेरा छरेर भात चढाउनु :अप्सनी
नेवारी समाजमा सुर्यदर्शनलाई महिलाको सुर्यदेवसंगको बिबाहको रुपमा मानिन्छ । नेवारी समाजमा पहिलो बिवाह बेलसंग, दोस्रो बिबाह सुर्यसंग गरिने भएकोले लोग्ने मरे पनि विधवा हुनु पर्दैन भन्ने परम्परा रही आएको छ । सुर्यदर्शन महिलाको पहिलोपटक महिनावारी चक्र सुरु हुनु अगावै सम्पन्न गरिन्छ । सुर्य दर्शन पुजाको दौरान महिलालाई आफ्नो दुवै हातका औंलाहरू क्रस गराई सानो प्वालबाटसुर्यको दर्शन गराइन्छ । बैज्ञानिक तथ्य अनुसार १५ मिनेट सुर्य दर्शन गर्नाले मानसिक तनावहरु कम भइ आत्मविश्वास बढ्ने गर्दछ । यसले दिमागबाट अनावश्यक सोचाई, अनुभूतिहरुलाई हटाएर आनन्द र परमानन्दको अनुभूति गराउँछ । यसले मानिसभित्र रहेको दिक्क लाग्दो स्वभावलाई उत्साही र प्रबल बनाई निर्णय क्षमता वृद्धि गर्ने गर्दछ । सुर्य दर्शन गर्नाले मानिसको दिमागलाई उर्जावान, आनन्दित, शान्त र एकत्रित बनाउन सहयोग गर्दछ । साथै शरीरमा सकारात्मक उर्जाहरु थपेर स्वस्थ रहन सहयोग गर्दछ ।
हिन्दु संस्कारमा दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्नुलाईसामान्यतया एकले अर्कोलाई सम्मान तथा अभिवादनको रुपमा बुझिन्छ । तर बैज्ञानिक अर्थमा दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्दा हत्केलाका औंलाहरू एक आपसमा जोडी आँखा, कान र दिमागको चाप बिन्दुहरुमा सिधा असर पर्दछ र अभिवादित व्यक्तिलाई लामो समयसम्म सम्झिन सहयोग गर्छ ।
खुट्टाको औंलामा रिंग लगाउनु
चरण स्पर्श तथा ढोग प्रायस् धर्मगुरु वा आफु भन्दा ठुलालाई आदर स्वरूप गरिन्छ । जब आदरणीय गुरु तथा सदस्यहरुले श्रद्धाले दिएको अहंकारबिहिन चरण स्पर्श तथा ढोगलाई स्वीकार गरिन्छ, तिनीहरुको मनबाट सकारात्मक बिचार एवं उर्जा ९जसलाई करुणा भनिन्छ० उत्पादन हुन्छ जुन हात तथा पाउ मार्फत चरण स्पर्शकर्तातर्फ प्रसारण हुन्छ । यसरी चरण ढोग गर्दा दुई अन्तर आत्माहरु एक आपस जोडिन्छ र अध्यात्मिक तथा कस्मिक उर्जाहरु धर्मगुरु वा आदरणीय सदश्यबाट प्रसारित हुन्छ । स्नायु प्रणाली अनुसारदिमागबाट निस्केका नसाहरु शरीरको विभिन्न भागहरुमा पुगेका हुन्छन् । शरिरको हात र खुट्टाहरु स्नायु प्रणालीको अन्तिम विन्दुहरू मानिन्छन् । हात मिलाउँदा र अंगालो मार्दा पनि उस्तै खालको उर्जाहरु एक आपसमा प्रसारण हुने गर्दछ । जब हात वा खुट्टाका औंलाहरू अर्को शरीरको हात वा खुट्टामा छुन्छ, एक किसिमको सर्किट बन्छ र दुई शरीरको अन्तरआत्माहरु जोडिन्छ । चरण स्पर्श गर्दा ढोग्नेको हात तथा औंलाहरू उर्जा प्राप्तकर्ता व्यक्ति हुन्छ भने अर्कोको पाउ उर्जा प्रदान गर्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित हुन्छन् ।
सिन्दुर बेसार र पारोको समिश्रणबाट बनाइएको हुन्छ । पारोको अन्तर्निहित गुणले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नु साथसाथै यौन चाहना उत्प्रेरण गर्ने गर्दछ । यसै कारणले गर्दा बिधुवा तथा अविवाहित महिलाहरुलाई सिन्दुर लगाउन बर्जित गरिएका हुन् । सिन्दुरलाई शरिरको यस्तो भागमालगाइन्छ ९एष्तगष्तबचथ न्बिलम को माथिल्लो भाग०, जहाँ महिलाहरुको अनुभूतिहरु केन्द्रित हुन्छन् । पारोले हाम्रो शरीरको तनाव कम गर्न पनि यथेष्ट सहयोग गर्दछ ।
किन उत्तर दिशामा टाउको पारेर सुत्नु हुँदैन